Ny minisitry ny fizahantany ao amin'ny WTTC dia miangavy amin'ny sehatra tsy miankina sy tsy miankina mba hiara-hiasa
Home » Vaovao momba ny indostria fihaonana » Ny minisitry ny fizahantany ao amin'ny WTTC dia miangavy amin'ny sehatra tsy miankina sy tsy miankina mba hiara-hiasa
Aprily 26, 2021
Niara-nientana ireo minisitry ny fizahan-tany maneran-tany hanentana ny sehatra tsy miankina sy tsy miankina mba hiara-hiasa hamonjy Travel & fizahan-tany ao amin'ny World Travel & Tourism Council (WTTC).
Ny fikarohana WTTC dia mampiseho ny fiantraikan'ny COVID-19 amin'ny sehatra dia 18 heny ratsy kokoa noho ny fianjerana ara-bola tamin'ny 2008.
Manaiky ny minisitra fa ny fiaraha-miasa akaiky amin'ny fanjakana sy ny tsy miankina no lakilen'ny sehatra famelomana ny toekarena manerantany.
Ny filoham-pirenena & CEO an'ny WTTC dia nilaza fa ny fahamatorana vokatry ny COVID-19 dia tsy azo hamaivanina.
Ity hafatra maika avy amin'ny Minisitry ny fizahantany ao amin'ny WTTC ity dia tonga tamin'ny fivoriana Global Leaders Dialogue tao amin'ny Global Summit 2021 an-taonan'ny WTTC izay natao tany Cancun Mexico tamin'ity herinandro ity nandritra ny hetsika natao tany Cancun, Mexico.
Nandray anjara tamin'ity hetsika ity ny minisitra manan-danja sy ny mpitarika orinasa, izay nahafahan'ireo nandray anjara tamin'ny dinika nifanakalo hevitra momba ny fomba hahafahan'ny sehatry ny fizahantany sy fizahan-tany mamelombelona ny dia iraisam-pirenena sy manampy amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny toe-karena manerantany.
Notarihan'ny mpanao gazety mpitsangatsangana amerikana Peter Greenberg, ireo minisitra dia nibanjina ny lasa tamin'ny taon-dasa ary nizara ny fomba nahatsiravina ny areti-mandringana ho an'ny sehatra sy ny maha-zava-dehibe ny fandraisana andraikitra izao hisamborana ny fianjeran'ireo orinasa sy ny fahaverezan'ny ampolony asa an'arivony.